रक्सी र चुरोट आधारभुत आवश्यकता होइनन् ,आफ्नो भबिस्य उज्ज्वल बनाउने तर्फ लागौं | Namuna Nepal
सोच्दै नसोचेको लक डाउन अबधी लम्बिदै छ , काम गर्ने बातावरण बनिसकेको छैन , र थुप्रै जनामा अन्यौलता छाएको छ। जनस्तरबाट उठेको प्रश्नलाई हामीले सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउने र सकेसम्म सही सूचना दिनेप्रयास गरेको छौ।
ताकी सबैलाई सजिलो होस। यती बेला केही प्रश्न उठेका छन् ! जस्तै रद्ध भएका डेटको ईमेल कहिले आउछ ? आँफै डेट लिनु पर्छ कि उतैबाट आउछ ? काम छुट्यो अब तत्काल डेट पाए पनि कन्ट्र्याक्ट के गर्ने ? पे स्लिप तीन महिना को बुझाउन पर्थ्यो सधैं, अब यस्को के हुन्छ ? काम नै नभएपछी डिक्लेरेसाओ पेपर लैजाने कसरी ?
यस्ता केही बिषयहरु छन्, जुन उठेका छन र स्वभाविक पनि हो।
हामीले सम्बन्धीत निकायहरु सँग यहाँको करदाता भएर बसिसकेपछी प्रश्न गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ? यसै शिलशिलामा पोर्चुगिस अध्यागमन कार्यालयमा काम गर्ने मेरो एकजना पोर्चुगिस साथी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा भएको थियो , उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो की अहिले हामीले घरमै होम अफिस बनाएर काम गरीरहेका छौ।
यो सबै समस्या हामी कसैले चाहेर भएको हैन। सेफले गर्ने भित्री काम सबै सोही अनुरुपनै भईरहेको छ । मात्र समस्या डेटहरु मिलाउने रहेको छ। त्यस्को लागि अब आगामी दिनमा नयाँ कार्ड हरु २ वर्षे र ३ वर्षे दिने तरिकाले गराउदा दिर्घकालिन रुपमा सेफमा उपस्थिती हुने चाप केही हदसम्म कम हुन्छ भने अर्को कुरा कुनै पनि राज्यले इमर्जेन्सी, लकडाउन ,आपतकालीन जस्ता कुराहरु यसै लगाउने हैन ,जहिले पायो त्यहीले लगाउने पनि हैन।
जब जनता र राज्यमा कुनै ठुलो संकट आउछ , महामारी आउछ त्यो बेलामा सबै निती नियम लाई कभर गरेर इमर्जेन्सी अवस्था लागु गरिन्छ। जुन जनहित को लागि पनि हुन्छ। हाल संसारका कैयौ देशको अवस्था पनि यहीँनै हो । संसार बिकासको चरम सिमामा पुगेपनी जनस्वास्थ्य जती ठुलो कुरा केही हुँदैन । त्यसैले आपतकालीन अवस्थामा छुटेको कामको कन्ट्रयाक्ट ,डिक्लेरेसाओ , पेस्लिप नभएर केही फरक पर्दैन तर तपाईंसँग पुरानो चाँही हुन जरुरी छ।
त्यस्लाई सुरक्षित राख्नु होला। अनी अर्को कुरा ले-अफमा पैसा पाउनु भएकोहरुको हकमा केही समस्या भएन। किन भने ले-अफको पैसा तपाईंले पाउनु भएको मात्र हैन, त्यस्को ट्याक्स पनि कम्पनीले हालेको हुन्छ र हाल्नु पर्छ। दुबिधा काम छुटेको र काम पाउन नसक्नु भएकोलाई हो। यसको लागि यहाँको निकाय ले सक्दो सहयोग गर्ने छ।
इमर्जेन्सी अवधी मजदुर दिवसको भोली पल्ट मे २ बाट खोल्ने तयारी भए पनि १५ दिनको लागि परिक्षण गरेर कोरोना संक्रमणको वृद्धिदर हेरिकन नयाँ नियम लागु हुन सक्छ। सबैभन्दा ठुलो जनस्वास्थ्य हो , जनता रहेनै सरकारले सबै काम गर्न- गराउन सक्छ ।
आपतकालिन अवस्था खुली हालेपनि तुरुन्तै नयाँ कामहरु खुल्न , रेस्टुरेन्ट ब्यवसायले पिक अप लिन अली गाह्रोनै हुन्छ होला। कम्तीमा यो वर्ष धैर्य गरेर पहिला आफ्नो बारेमा कम्तीमा पनि छ महिना पछिको अवधिसम्म यसरी जानेछु भन्ने प्लान आजै बाट बनाउदा सबैलाई सजिलो होला। छ महिना सम्म बसेर खान एक जना लाई सामान्य तरिका १५० युरोले कोठा भाडा र मेरो हिसाबमा अन्य खर्च ९० /१००भयो भने मलाई पुग्छ।
महिना को २५० युरोले एकजना लाई कुनै दु:ख नकाटी बसेर खान पुग्छ पोर्चुगलमा। अब छ महिनासम्म पनि काम पाइएन भने १५०० युरो को जोहो गर्नु पर्‍यो। यहाँ मैले कस्तो पनि देखेको छु भने खाना खान गार्हो छ दाई भन्ने अनी पसलमा गएर ५ युरो को चुरोटको प्याक किन्न नडराउने।
अनी त्यो एकै दिनमा सक्ने। स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ, मैले मात्र भन्न खोजेको यहाँ के भने रक्सी चुरोट आधारभुत आवश्यकता हैनन् र यिनको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। बरु छ महिनासम्म रक्सी चुरोट खाने पैसा खुत्रुकेमा राख्ने हो भने अर्को छ महिना लाई खान पुग्छ।
पछिल्लाे - गुल्मीको शान्तिपुरमा आगलागी ,१५ बर्षिय किशोरको ज्यान गयो
अघिल्लाे - एनआरएनए पोल्याण्डले बनायो तीसहजारको आपतकालिन कोष सहित सर्वपक्षीय समिति